Maxkamadda gobolka Banaadir oo amartay in lasoo xiro mas’uuliyiin fal musuq ah lagu eedeeyay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamadda gobolka Banaadir oo amartay in lasoo xiro mas’uuliyiin fal musuq ah lagu eedeeyay (AKHRISO)
Warqad kasoo baxday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu amray taliska booliska Soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo xiro agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya C/risaaq Yuusuf Bahlaawi iyo agaasimihii maamulka & maaliyadda Xasan Samatar Cali.
Warqadaan oo ku saxiixan guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Aweys Sheekh C/laahi Wehliye ayaa lagu sheegay in labadaasi mas’uul ay ku xad-gudbeen qodobka 255-505 XCS.
Taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa warqadaan lagu faray inay soo qabtaan labadaasi nin, isla markaana ay horgeeyaan xafiiska xeer illaalinta dalka.
Dhawaan ayay ahayd markii wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Injineer C/raxmaan Yariisow oo shaqo joojin ku sameeyay agaasimihii wasaaradda warfaafinta C/risaaq Yuusuf Bahlaawi, kadib markii uu ku eedeeyay maamul xumo iyo arrimo musuq-maasuq ah.
Illaa iyo haatan lama oga sida uu amarkaan ku dhaqan geli doonno, iyadoona amarkaan uu noqonayo tijaabadii ugu horeeysay oo ay dowladda Farmaajo iyo Kheyre hore u ballanqaaday inay kula dagaalamayso arrimaha musuq-maasuqa ee hareeyay dalka.